Kenya oo diiday ka qeygalka dhageysiga Kiiska Badda | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo diiday ka qeygalka dhageysiga Kiiska Badda
Dowladda Kenya ayaa u sababeysa go'aankeeda diidmada Maxkamadda inay dib u dhigto dhageysiga.
NAIROBI, Kenya - Kenya ayaa ku wargelisay Maxkamadda ICJ inaysan ka qeybgalaynin dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya oo lagu wado inay berri dhacdo.
Dowladda Kenya ayaa u sababaysay go'aankeeda diidmada ICJ ay u diiday inay mar 4aad dib u dhigto kiiska Badda oo tan iyo 2014 soo jiitamayay, islamarkaana khilaaf xoog leh ka dhex abuuray labada dowladood, iyadoo ay xiriirka isku jareen.
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Kihara Kariuki ayaa u diray Maxkamada Cadaalada Adduunka warqad ku taariikheysneyd 11-kii Maarso in Kenya ay ka laabaneyso dacwada kadib markii la diiday codsigeeda ahaa dib u dhigista dhageysiga.
"Kenya waxay jeceshahay inay ku wargaliso Maxkamada inaysan ka qeyb galeynin dhageysiga kiiska badda, hadii aan la bedelin jadwalka Maarso 15, 2021, sida hada loo qorsheeyay," ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Qaranka Kenya.
Walaaca Kenya ayaa ah inay jirto cadaalad darro maadaama uu kiiska ku jiro garsoore u dhashay Soomaaliya Abdulqawi Axmed Yuusuf oo bishii lasoo dhaafay ka degay xilka gudoomiyaha Maxkamadda ICJ.
Kenya waxay kaloo sheegtay inaysan u diyaar-garoobin ka qeybgalka dhageysiga Kiiska, sababo la xiriira COVID-19 iyo qareenadii ajnabiga ay kireysatay oo wali isku aadaneyn.
ICJ ayaa la filayaa inay go'aanka Kenya ka hadasho inay sii wadeyso dhageysiga iyo inay dib u dhigi doonto. Wafdi ka socda Soomaaliya oo uu hogaaminayo Mahdi Guuleed ayaa ku sugan Holland oo u tagey inay ka qeybgalaan dhageysiga maalinta berri dhacaya.
Sidan oo kale, Dacwad badeed u dhaxeysay China iyo Philippine ayaa iyadoo hal dhinac maqan yahay Maxkamadda dhageysatay kiiskooda.